आयकर विभागको जाँचपछि सोनुको सम्पत्तिको चर्चा : कमाउछन् बर्षमा १२ करोड, सम्पत्ति कति ? Canada Nepal
आयकर विभागको जाँचपछि सोनुको सम्पत्तिको चर्चा : कमाउछन् बर्षमा १२ करोड, सम्पत्ति कति ?
काठमाडौं - बलिउड अभिनेता सोनु सुदको पछिल्लो समय निकै चर्चा छ । कोरोना प्रभावितलाई सहयोग गरेर रियल लाईफका हिरो बनेका सोनुको घरमा आयकर विभागले छापा मारेपछि उनी झन चर्चामा आएका छन् ।
अहिले उनको सम्पत्तिको बारेमा चर्चा सुरु भइरहेको छ । मुम्बईमा घर र होटलसहित ६ स्थानमा आयकर विभागले छापा मारेपछि उनको सम्पत्ति कति होला भन्ने धेरैको चासो बढेको छ ।
पत्नी र बच्चासँग मुम्बईमा बस्दै आएका सोनुको अहिले करीब १ सय ३० करोड सम्पत्ति रहेको छ । ७० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेका सोनुले पछिल्लो समय एक फिल्मका लागि २ करोड लिने गर्छन् । उनको आम्दानीको मुख्य स्रोत ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट हो ।
सबै गरेर सोनुको वार्षिक १२ करोड कमाई हुने बताइएको छ । सोनुको मुम्बईमा अर्को २ वटा फ्ल्याइट पनि छ । त्यति मात्र होइन उनको मोगामा एक ठुलो घर पनि छ । उनको होटल पनि चलिरहेको छ ।
आयकर विभागले असहले सोनुको आम्दानीको स्रोत, बैंक खाता लगायतको खोजी गरिरहेको छ । सोनु दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको पार्टीसँग जोडिन लागेकोले उनको घर र होटलमा विभागले छापा मारेको बताइएको छ । घरमा छापा मारेको थाहाँ पाएपछि केजरीवालले सोनुको जित हुने विश्वास रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पनि लेखेका छन् ।
आश्विन १, २०७८ शुक्रवार १४:०१:५४ बजे : प्रकाशित